को होला त्यो मार्क्स लगाएको मान्छे ? यस्तो रहेछ रिनाको मृत्यु रहस्यः पत्थरी घटना अपडेट (भिडियाे सहित) – Khabar Art Nepal
को होला त्यो मार्क्स लगाएको मान्छे ? यस्तो रहेछ रिनाको मृत्यु रहस्यः पत्थरी घटना अपडेट (भिडियाे सहित)
By खबर आर्ट नेपाल	 On १२ बैशाख २०७६, बिहीबार ०७:४३
बैसाख १२ पत्थरी । पाँच दिनअघि मोरङको पत्थरी बजारमा आफ्नै डेराअघि नग्न अवस्थामा मृत्त फेला परेकी रिना बस्नेतको मृत्यु घटनालाई प्रहरीले तीब्र रुपमा छानविन अगाडि बढाएको छ ।
रिनाको रहस्यमय मृत्युपछि सोमबार र मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बनेको पथरी बजार अहिले केहि सामान्य बने पनि स्थानीयले घटनामा संलग्नलाई जतिसक्दो पत्ता लगाएर कार्वाही गर्न प्रहरीलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
शुक्रबार दिनभर पसलमा बसेकी रिना साथीको छोराको जन्म दिनमा छोरासहित साँझ गएकी थिइन् । उनको मोवाइलमा बारम्बार फोन आईरहेको थियो । उनका साथीहरुका अनुसार उनको फोन अरुबेला पनि त्यसैगरी आउने गर्दथ्यो । उनी जाने भन्दै हतार गर्न थालिन् । बेलुका करिब ८ बजे उनी निस्किने तयारी गर्दा उनलाई केही खाएर जाने आग्रहपछि उनले थोरै मासु खाइन् ।
जन्मदिनमा टीका लगाई दिइन् अनि हतारमा त्यहाँबाट बाहिरिन् । त्यहि रात पथरीमा कन्सर्ट आयोजना भएको थियो । उनीहरु आमा छोरा सिधै कन्सर्टमा गए । उनीहरु राति करिब ११ बजे कोठा फर्किए । सधै बियर खाने आमालाई त्यस दिन पनि छोराले नजिकैको पसलबाट बियर ल्याई दिएका थिए । उनले भने स्प्राइट खाए । राति दुबईबाट बाबाको फोन आयो ।
दुबै जना बोले उताबाट चाँडै नेपाल आउने बताए । रिनाको फोनमा त्यसअघि देखि नै कमल नेपालको फोन आईरहेको थियो । कमल नेपाल पथरीका ब्यापारी हुन् । स्थानीय र रिनाका छोराका अनुसार कमलसँग उनको समबन्ध पुरानो नै हो । कमलले नै रिनालाई खर्च दिने समेत गर्दथे ।
छोरा साइमनका अनुसार कमलले उनलाई समेत मोबाइल किनिदिएको खुल्न आएको छ । राति लगभग १२ बजेतिर साइमन सुते । आफू सुतेपछि के–के भयो थाहा नभएको साइमन सुनाउँछन् । भोलिपल्ट घटनापछि मात्र आफूले आमा नरहेको थाहा पाएको बताएका छन् ।
घट्नापछिका अरु घटना
घटना भएको दोस्रो दिन आइतबार स्थानीय र आफन्तले रिनाको हत्या भएको दावी गरे । तर प्रहरीले सो घटना मादकपदार्थ सेवन गरी बाथरुम जाने क्रममा लडेर भएको बतायो । प्रहरीको कुरामा स्थानीयले विश्वास गर्न सकेनन् । कोठामा बियरका बोतल र भित्रि कपडा समेत भेटाएको भन्दै प्रहरीले आँखामा छारो हाल्न खोजेको स्थानीयले आरोप लगाए ।
तर स्थानीय र आफन्तले रिनाको हत्या भएको भन्दै आक्रोश चर्को बनाउन थाले । यहि बीचमा छोरा साइमनले कमल नेपाल र आमाको सम्बन्ध बारेमा बोलेपछि घटनाले अर्को रुप लियो । स्थानीयले कमल नेपालले हत्या गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई पक्राउ गर्न माग गर्न थाले ।
अनि चर्कियो आन्दोलन
घटनाको तेस्रो दिन प्रहरीले आफ्नो अडान छोडेन । स्थानीयले दिनभर घटनाको बिरोध गरे । प्रशासनसँग छलफल गरे पनि समस्याको समाधान निस्किएन । साँझ स्थानीय कविता पराजुलीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरियो । मृतकका श्रीमान पनि बिदेशबाट पथरी आए । घटनाले नयाँ मोड लियो ।
कमल नेपाललाई हत्याको आरोप लगाउँदै पक्राउ गर्न मागसहित प्रदर्शन र चक्काजाम गरियो । स्थिति तनावपूर्ण भएपछि साँझ कमल नेपाल ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीको सम्पर्कमा आए । ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका इन्स्पेक्टर कमल बजगाईले मेयर दिलिप राईलाई कमल पक्राउ गरेको बताए । सो हल्ला फैलिएपछि स्थानीय थप आक्रोशित भए ।
दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दा अश्रुग्याँस
घटनाको चौथो दिन मंगलबार बिहानैदेखि पथरी तनावग्रस्त बनयो । स्थानीयले नगरपालिकामा तालाबन्दी मात्र गरेनन् गेट नै फोडेर प्रदर्शन गरे । त्यसपछि इलाका घेराउ गर्न गएका स्थानीयले नाराबाजीसहित इलाकाको गेटमा ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले ३० सेल बढी अश्रुग्याँस प्रहार ग¥यो । ५ जना स्थानीय र ३ जना प्रहरी गरी ८ जना घाइते भए । सोही घटनाको बिरोधमा स्थानीयले चक्काजामसहित टायर बालेर बिरोध गरे ।
प्रहरीले फेरि अश्रुग्याँस प्रहार गर्‍यो । आसपासका अस्पतालमा रहेका बिरामी मात्र नभएर अन्य स्थानीयलाई समेत समस्या भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि पथरीका मेयर दिलिप राई र उपमेयर यमुना बिष्ट बाँस्तोलाले सडकमा निस्किएर प्रहरीलाई पछि हट्न आग्रह गरेपछि स्थिति केही सामान्य बन्यो । त्यसपछि प्रशासन र संघर्ष समितिबीच बार्ता भएपछि ३ दिनका लागि प्रहरीले समय माग्यो र स्थानीय पछि हटेका छन् ।
यस्तो रहेछ घटनाको अन्तर्य
पछिल्लो घटना रिना बस्नेतको मृत्युसँग मात्र जोडिएको छैन । यसअघि पथरीमा भएका ५ वटा घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले देखाएको सुस्तता र अलमलका कारण पनि यो घटनाले आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गर्न पुगेको देखिएको छ । प्रहरीसँग पथरीबासी सन्तुष्ट छैनन् ।
कारण कुनै पनि घटनामा प्रहरीले चित्तबुझदो अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । करीब एक महिनाअघि भएको सिक्का बार काण्डले त झनै प्रहरीप्रति स्थानीयलाई बितृष्णा जगाएको स्थानीय बताउँछन् । पीडितहरु अझै अनुसन्धान फितलो भएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रममा सोही घटना र पीडितहरु समेत जोडिएका छन् ।
शनिबार बिहान मर्निङ वाक गर्ने स्थानीयले पथरी १ मा एउटा नग्न शव घोप्टो परेको अबस्थामा देखे । प्रहरीले खबर पाएपछि आएर हेर्दा सोही स्थानमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्दै आएकी २९ बर्षिया रिना बस्नेत (रुपा) को शव भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि हल्लाखल्ला शुरु भयो ।
रिनाका श्रीमान दुबईमा थिए । उनी १४ बर्षिया छोरा साईमन सँग पथरीमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्दै आएकी थिईन । नग्न अबस्थामा भेटिएको शव मोष्टमार्टमका लागी प्रहरीले लाने कोशिष गरेपनि मृतकका आफन्त र स्थानीयले केहीक्षण शव उठाउन दिएनन् । तर प्रहरीलाई जबरजस्ती शव उठाएर धरान पुर्‍यायाे ।
के छ सिसी क्यामेराको फुटेजमा ?
प्रहरीले घटनापछि रिनाको मोबाइल र कमलको मोबाइल नियन्त्रणमा लिईसकेको छ भने सोही रातको सिसी क्यामेरा फुटेजमा कैद भएको दृष्यको अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोही दिनको फुटेजमा मार्क्स लगाएको एक ब्यक्तिले अटोरिक्सामा बोराले छोपेर केही सामान ल्याएर घटनास्थलमा फालेको देखिएको छ । यी प्रमाणहरुले उनको अन्यत्र लगि हत्या गरेर सोही ठाउँमा ल्याई फालेको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ ।
को होला दोषी ?
घटनाको पाँच दिन बितिसके पछि प्रहरीले रिनाको मृत्युमा दोषी व्यक्ति किटान गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीयले रिनाको हत्यामा कमल नेपाललाई शंका गरेका छन् । उनी प्रहरी नियन्त्रणमै छन् । उनीसँगको बारम्बारको सम्पर्कका आधारमा पनि उनलाई शंका गरिएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । उनी निर्दोष पनि हुन सक्छन् ।
यी बिषयमा अहिले नै सबै कुरा भनिहाल्नु उपयुक्त नहुने एक स्थानीय बताउँछन् । केही स्थानीय रिनासँग अरुको पनि संगत रहेकाले उनीहरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
याद राख्नुहोस यसकारण यी ५ मसला सोच-विचार नगरी खान हुदैन